I-Tire Bead Seters Factory, ababoneleli |China iTire Bead Seaters Abavelisi
● ItayaraIsixhobo sokuHlalisa amasoukudubula umoya ngaphandle kwetanki ngokukhawuleza kubeka amatayara kwiirimu.Isixhobo sifanelekile koomatshini bezolimo, iilori, iimoto kunye nezithuthuthu.
● Sisixhobo esiyimfuneko kuyo nayiphi na indawo yokusebenzela yamatayara.I-valve yokhuseleko eyakhelwe-ngaphakathi elawula uxinzelelo lwetanki kunye ne-gauge eyakhelwe-ngaphakathi ebonisa uxinzelelo lwangoku lwetayara.
● Umqheba owenza kube lula ukubamba i-inflator emphethweni kwaye yenza kube lula ukuphatha isixhobo.
● Iigaloni ezi-2Isixhobo sokuHlalisa amasoIqulathe itanki eyomeleleyo, isinyithi yonke, egqutywe ngumgubo eyomeleleyo kwaye yomelele ngokwaneleyo ukuze ihlale iluncedo kwixesha elide.Ukugquma komgubo okugqwesileyo kuyenza irusi kwaye imelane nomhlwa.
● Emva kokuba ufake ngokuchanekileyo umbhobho woxinzelelo oluphezulu kwisithuba esiphakathi kwetayara kunye nerim kwaye ngokukhawuleza wavula ivalve YAKUVULA, uya kuchitha ixesha elifutshane uvuthela umoya kwitayara kwaye emva koko uCime ivalve.
● Izithuthi ezahlukeneyo zifuna uxinzelelo oluhlukeneyo lokusebenza.Igeyiji inokukunceda ukuba ufunde ngokuchanekileyo kwaye ubeke uxinzelelo lwezithuthi ezahlukeneyo.Uxinzelelo lwe-inflator yethu luphakathi kwe-87-116 PSI.
● Umlebe owenziwe ngendlela ekhethekileyo ubamba umphanda wentambo kwi-engile efanelekileyo yokuphuma komoya xa uhlaliswa ngamaso, ngoxa ivalve yokukhulula ngokukhawuleza isasaza umoya ukuze ukhuphe umoya ozeleyo etayaleni.
● I-high pressure inflator yomoya ifanele izithuthi, iimoto, iilori, iitrektara zengca, iitrektara, iitrektara ezinkulu, ii-RV, ii-ATV kunye nokunye.Ikwakulungele ukuba uyithathe ngesiphatho.
5 Gallon Air Tire Bead Seat
● IIsitulo seentsimbi zamasondo eegaloni ezi-5ilungele iimoto, iimoto, iilori, iitrektara zengca, iitrektara, iitrektara ezinkulu, ii-RVs, i-All-Terrain Vehicles, njl njl. Isiphatho sikwakulungele ukuba uthathe
● Isitulo esinamaso sidubula umoya ocinezelweyo phakathi kwevili kunye nentsimbi yetayara;ilungele iindlela zokuqhushumba ezithe nkqo nezithe tye;Xa ivili liqhushumba, umda wombhobho uphumla kumda wevili ukuze ufumane i-angle egqibeleleyo ye-40 degree.
● Gcwalisa itanki yomoya ngecompressor eqhelekileyo kwiworkshop;Isitulo sethu sentsimbi singalungisa amatayara ukusuka kwi-4" encinci yamatayara ukuya kwi-24-1 / 2" enkulu yamatayara elori.
● Qhagamshela i-chack yentloko ezimbini kwivalve yebhola ukuze ujike le blaster yethayara elinomoya ibe sisivusi-moya esiphathwayo;Uxinzelelo lomoya oluphezulu lwetanki yomoya yi-150 PSI, engasetyenziselwa ukuseta indawo yoxinzelelo oluphezulu lwentsimbi yesondo.
● Akukho mfuneko yokusebenzisa isepha, imitya yeratchet kunye nolwelo ukulungisa amatayara;esi situlo sokubetha isondo silungele ukusetyenziswa kwe-DIY kwimoto yakho okanye i-RV;umqheba ekulula ukuwuphatha wetanki ufanelekile kumsebenzi wobuchwephesha ojikeleze iindibano zocweyo ezixakekileyo.